डा. प्रकाशको फूलकुमारी
काठमाडौं : डा.प्रकाश पौडेल पेसाले चिकित्सक हुन् । विगत केही वर्षदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सफल गीतकारको परिचय बनाइसकेका डा. प्रकाशले फेरि एउटा बेग्लै किसिमको गीत बजारमा ल्याउँदै छन् । केही दिनमै रिलिजको तयारीमा रहेका उनको महत्वकांक्षी गीत फूलकुमारी बिहीबार बजारमा आउँदैछ ।
विगत १७ वर्षदेखि नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सक्रिय म्युजिक कम्पनी एसियन म्युजिक कम्पनीले बजार व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको फूलकुमारी अहिलेका चर्चित संगीतकार राजनराज सिवाकोटीले गीतलाई गाउनुका साथै संगीत दिएका छन् ।
संजीव बराईलीको मिठो संगीत संयोजन रहेको गीतमा अहिलेका हिट नायक पल शाह र कान्तिपुर टेलिभिजनकी समाचार वाचिका श्री पाण्डेले मोडलिङ गरेका छन् । गीत बजारमा नआउँदै चर्चाको शिखरमा रहेको छ । गीतलाई ‘ट्वान्टीवान लभ’, ‘यु एन आई’ जस्ता सफल सिरिजका निर्देशक सरिन पोखरेलले निर्देशन गरेका छन् । उत्सव पोखरेल दाहालको क्यामेरा, विकास दाहालको सम्पादन रहेको फूलकुमारीमा मिक्सिङ श्यामश्वेत रसाईलीको रहेको छ ।
ललितपुरको गोदावारीको रमणिय स्थानहरुमा गीतको दृश्य खिचिएको फूलकुमारी फ्युजन प्रकारको रहेको गीतकार डा. प्रकाश पौडेल बताउँछन् । अहिलेका चलन चल्तीका गीतहरु भन्दाहरु भन्दा अलि फरक गर्ने कोसिस गरिएको गीतको म्युजिक भिडियो उत्कृष्ट बनेको एसियन म्युजिक कम्पनीका प्रमुख निर्देशक ईश्वर गुरुङ बताउँछन् ।
विश्व संगीत बजारमा एक सय भन्दा बढी डिजिटल प्लेटफर्ममा समय अनुसारको बजार मार्केटिङ गर्दै आएको एसियन म्युजिक कम्पनीको बजार व्यवस्थापनबाट गीतकार पौडेल सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । यस गीतका गायक संगीतकार राजनराज सिवाकोटी पनि फूलकुमारीबाट ठूलो आशा राखेको बताउँछन् । केही फरक काम गर्ने उद्देश्यले बजारमा ल्याइएको फूलकुमारीबाट यसका निर्देशक सरिन पोखरेल पनि सन्तुष्ट छन् ।
'आइ नै रहेका छन् र ल्याइ नै रहने छु'
केही समय पहिले ‘डाँडाको बरपिपल’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो । त्यो ‘डाँडाको बरपिपल’ नामक चलचित्रको गीत हो जुन युट्युवमा हेर्न र सुन्न सकिन्छ । त्यो नै गायिका सत्यकला राईको सार्वजनिक भएको पछिल्लो गीत हो । ‘तिमी मसँग नबोल्ने अरे’, ‘इन्टरनेटैमा’, ‘ए पूर्वै धारन’, ‘बेनी मेलैमा’, ‘आलुदम चना’, ‘र्‍याइँर्‍याइँ गर्‍यो सारंगी’ लगायत दर्जनौं गीत चर्चामा रहे पनि ‘तिमीलाई हङकङ पुरायो आइडी कार्डैले’ बोलको गीतले गायिका सत्यकला राईलाई अत्याधिक सफलता दिलायो । एकपछि अर्को स्रोता रुचीको गीतसंगीत पस्कदै आइरहेकी गायिका केही समय संगीतको क्षेत्रबाट नै हराएको जस्तो लागेपनि अहिले केही नयाँ सांगीतिक कोशेली सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छिन् । पुर्वको सुन्दर स्थान खोटाङ माक्पाकी स्थानीय गायिका राईको आइडी कार्डैले, बिर्सी जानेलाई, गुनासो लगायतका अडियो एल्बम सार्वजनिक भएका छन् । देश विदेशमा हुने सांगीतिक कार्यक्रमहरुमा प्रायः ब्यस्त रहने गायिका सत्यकला राई कोभिडका कारण सबैतिर सांगीतिक कार्यक्रम बन्द भैदिँदा चिन्तित छिन् । कलाकारहरुको आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भनेकै स्टेज प्रोग्राम भएको र त्यो नै नभएपछि कलाकारहरु समस्यामा परेको भएपनि बिस्तारै सुधार हुने र पहिलेकै अवस्थामा गीतसंगीतको क्षेत्र फर्कने आशामा रहेकी गायिका सत्यकला राईले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
धेरै भयो त नयाँ कोशेली स्रोता माझ नआएको कता हराउनु भयो ?
म हराएको छुइन । स्रोतामाझ नयाँ कोशेलीहरु पनि फाटफुट आइरहेकै छन् । यो कोभिडले गर्दा यस्तै छ । अलि कमै छ । सबै भन्दा ठुलो कुरा त ज्यानै जोगाउनु पर्‍यो नि होइन र ?
अहिले पहिले जस्तो अडियो क्यासेटको बिक्रीबाट आर्थिक लाभ नभएर गायनबाट टाढा रहनु भएको हो कि ?
त्यस्तो होइन, म कहाँ गीतसंगीतबाट टाढा भएकी छु र ? चलचित्रहरुको गीतहरु गाइरहेकै छु । र, आउँदै पनि छ । देश, बिदेश घुमिरहेकै छु । विभिन्न अवार्ड पनि पाइरहेको छु ।
सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने गीतको प्रचलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
अब यो समयको माग होला । अहिलेका गीतहरु प्रायः हेर्ने खाल कै बनेका हुन्छन् । साथै यो प्रविधिको विकासले गर्दा पनि होला ।
अहिलेको पुस्ताले नेपाली गीतसंगीतलाई चासो नदिनुको कारण के होला ?
अहिलेको पुस्ताले नेपाली गीतसंगीतलाई चासो नदिनुको कारण पनि यही प्रविधिको विकासले नै हो । अब पहिले पहिले मिडिया कम थिए । जहाँ हाम्रो नेपाली गीतसंगीत मात्र बज्थे । तर अहिले प्रत्येक ब्यक्तिको हातमा मिडिया छ । देश विदेशका गीतसंगीत सुन्न, हेर्न पाइने उनीहरुसँग विकल्प छ । त्यसैले उनीहरुको चासो पनि बाँडिएर आफ्नो देशको गीतसंगीतमा चासो कम हुन गएको जस्तो लाग्छ ।
आफ्नै स्वरबद्ध गीत मध्य कुनले मनमा सन्तुष्टि दिलायो ?
मैले आफुले गाएका गीतहरु सबै राम्रा लाग्छन् । तर गाएर सन्तुष्टि भने थोरैमा मिलेको छ र आफुले पूर्णरुपले गाएँ भनेर सन्तुष्ट भने हत्तपत्त भएकी छैन ।
स्रोता, दर्शकहरुको लागि नयाँ केही ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?
स्रोता दर्शक माझ ‘काँडेतार’नामक देशभक्तिपूर्ण चलचित्रमा मेरो स्वर आउँदैछ । त्यसमा शीर्ष गीत र रोमान्टिक गीत छन् । दुबै गाएकी छु । आशा छ यी गीतहरुलाई जुन देशप्रेम र देशलाई जोगाउन पर्छ भन्ने भावले ओतप्रोत छन् । प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरुले मन पराइदिनु हुने छ भन्ने आशा लिएकी छु ।
व्यापारमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ, गीतसंगीतलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
गीतसंगीतको मात्र भर हुँदैन । त्यसैले व्यापारमा पनि आवद्ध छु । तर, बढी गीतसंगीत तिरै लाग्ने कोसिसमा छु ।
कुनै समयको बहुचर्चित गायिका अब त्यो स्थान हासिल गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ कि ?
मलाई लाग्छ दुई चार वर्ष, महिना गीत हिट भएन भन्दैमा स्रष्टाको चर्चा नाम हराउँदैन जस्तो लाग्छ । किन भने एकपटक दर्शक, स्रोताहरुको मनमटुमा बसेपछि सधैं सम्झिरहनु हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । गीतसंगीत त आइनै रहेका छन् र ल्याइ नै रहने छु ।
कोभिड कहरले गीतसंगीतको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो जस्तो लाग्छ ?
कोभिड कहरले गीतसंगीतको क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परेको छ किन भने गीतसंगीतबाट जुन कलाकारहरुलाई आर्थिक रुपले सहयोग पुगिरहेको थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन । देश विदेशमा हुने सबै कार्यक्रमहरु बन्द भएका छन् । यसले हामी गायक कलाकारहरुको रोजिरोटीमा ठुलो प्रभाव पारेको छ ।
नायक, निर्माताको परिवारमा हुनुहुन्छ चलचित्रमा काम गर्ने कुनै चाहना छैन ?
चलचित्रमा नायक, निर्माताज्यूसँगै सधैं हुन्छु । पर्दामा नआएको मात्र हुँ । पर्दा बाहिरबाट त उहाँलाई साथ सहयोग दिइरहेकै हुन्छु । उहाँसँगको सहकार्य निरन्तर चलिनै रहन्छ ।
रोयल्टी लगायतका कुरा उठिरहँदा सर्जकले आफ्नो सिर्जनाको मुल्य पाउँदैनन् भन्ने गुनासो प्रति तपाईंको धारण के छ ?
यहाँ यस्तै छ जे कुरा पनि सजिलै पाउन सकिन्न । त्यसको लागि संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ । रोयल्टी पाउनका लागि सबै कलाकारहरु संघर्षरत छांै । कतिपय कुराहरु सर्जकहरुलाई कम्पनीहरुले खुलेर नगरेको कारण आपसमा मनमुटाव छ ।
लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक मध्यान्हमार्फत मेरा कुराहरु स्रोता, दर्शक माझ पुुर्‍याउने मौका दिनु भएकोमा तपाईं लगायत मध्यान्ह टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
‘पूर्वीय भजन, शास्त्रीय गीतलाई र्‍यापमा उतारेर विश्वमै पहिलो प्रयोग गरें’
कोरियोग्राफर अश्विनीकान्त झा यो क्षेत्रमा एक्लो बृहस्पिति जस्तै छन् । उनले नेपाली कोरियोग्राफीको क्षेत्रमा एक खालको उचाइ चुम्न सफल भएका छन् । झाले पूर्वीय भजन, शास्त्रीय गीतलाई र्‍याप्ममा उतारेर थप चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए । यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट थियो । त्यो निक्कै सफल भयो र अत्यधिक रुचाइयो पनि । यतिबेला मिसेस नेपाल वल्र्डको तयारीमा रहेका झासँग मध्यान्ह दैनिकका लागि प्रतिक्षा गौतमले गरेको कुराकानी :
हामी यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि गरेको निषेधाज्ञामा छौं । पछिल्लो समय केही खुकुलो भएको छ । यद्यपि संक्रमण भने कम भएको छैन । संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छैन । म पनि घरमा नै बसिरहेको छु । यो फुर्सदको समयमा अलिक बढी क्रियटिभ हुन पाएको मैले महसुस गरेको छु । विश्व बजारमा फेशन क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसको अध्ययन गरिरहेको छु । आगामी कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कार्य योजनामा छु । यस्तै मिसेस नेपाल वल्र्डको तयारीमा छु ।
कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, यतिवेला हामी कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा छौं । यसले कतिको असर पुर्‍याएको छ यो क्षेत्रलाई ?
हामीले समयमा नै यसको असरलाई पहिचान गरी त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सकेनौं । जसले गर्दा अहिलेको अवस्थाबाट हामी गुज्रिन बाध्य भएका छौ । मनोरञ्जनको सम्पूर्ण क्षेत्रसँगै ब्युटि प्याजेन्टको क्षेत्र पहिलो कोरोना लहरमा पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले यसले झन् हामीलाई असर पुर्‍याएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ होला ?
यस्तोमा अब बिस्तारै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीले जुन धार बनाइसकेका छौं व्युटि प्याजेन्टको क्षेत्रमा यसलार्ई अगाडि बढाउनु पर्छ । जुन हामीले मिस नेपालको क्षेत्रमा २५, २६ वर्ष यात्रालाई हेरौं, मिसेस नेपालको १०, १२ वर्षको यात्रालाई हेरौं, मिसेस नेपाल वल्र्ड जुन पहिलो पल्ट हुँदै छ यसलाई अब हामीले हामीमा जे जति स्रोत, साधान र क्षमता छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै जानु पर्छ भन्ने लाग्छ । हामीले बन्द त गर्नै मिल्दैन, कसरी वैकल्पिक तरिकाले हुन्छ अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ । सधैं यस्तो अवस्था त नहोला तर यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने भर्चुअल वा स्टुडियो कन्सेप्टमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
नेपालमा हुने हरेक ब्युटी प्याजेन्टमा आश्विनीकान्त झालाई देखिने गर्छ । यस्तो पनि लाग्छ कि आश्विनी झा बिना कुनै ब्युटी प्याजेन्ट सम्भव नै हुँँदैन कि क्या हो ? आश्विनी झा र नेपालका ब्युटी प्याजेन्ट एक अर्काका पुरक जस्तै भएका छन् । यो क्षेत्रमा तपाईं एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्छ भन्ने छ नि ?
यसमा चाहीँ म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता प्रतियोगिता आयोजकहरूले मलाई रुचाइदिनु भएको छ । प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई पनि मैले दिने ट्रेनिङ सायद उहाँँहरूलाई राम्रो लाग्छ । म अलिकति अपडेटेड भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो भइरहेको छ भनेर मैले दिने प्रस्तुतिलाई रुचाएर यस्तो भएको होला । म आफैँँ पनि बाहिर ट्रनिङ लिएर आएँ । हरेक प्रस्तुतिलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोशिसमा हुन्छु म त्यसैले होला भन्ने लाग्छ । म हरेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्याजेन्टहरूमा उपस्थित भएर गरिएका कामलाई उतिकै प्राथमिकता दिने गर्छु । म हरेक कामलाई यस्तो गर्ने कोशिस गर्छु कि काम नै खुशी होस् कि यो काम अश्विनीले गर्दै छ भनेर । मेरो मिहेनत र लगाव र कामको प्राथमिकताले नै हो जस्तो लाग्छ सबैले मनपराइदिनुहुन्छ । फेरि म कुनै पनि गाह्रो कामलाई सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने र त्यही अनुसार विद्यार्थीलाई सिकाउने कोशिसमा हुन्छु । जसको कारणले स्टेजमा उत्कृष्ट प्रस्तुति आउने गर्दछ ।
तपाईंले पूर्वीय भजनलाई पनि र्‍याप्मा उतार्नु भयो होइन ?
हो, मैले विश्वमा पहिलो पल्ट यस्तो प्रयोग गरेको हुँ । पूर्वीय भजन, शास्त्रिय गीतलाई र्‍याप्ममा उतारेको थिएँ । यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट थियो । त्यो निक्कै सफल भयो र अत्यधिक रुचाइयो पनि ।
यहाँँले अहिलेसम्म आउँदा धेरैलाई ट्रेनिङ दिइ सक्नुभएको छ, ट्रेनिङमा महत्वपूर्ण हुनै पर्ने कुरा के हो ?
हामी दुई पार्टबाट कुरा गर्दै छौं, एउटा फेशन शो र अर्काे ब्युटी प्याजेन्ट । ब्युटी प्याजेन्टमा ट्रेनरले व्यक्तिलाई प्रोडक्टका रुपमा हेर्ने गर्छ । त्यो व्यक्तिमा कम्पिलट निखार ल्याउनु पर्‍यो । त्यो व्यक्तिको आत्म विश्वास, त्यो व्यक्तिको स्टेजको प्रस्तुति, त्यो व्यक्तिको प्रश्नको उत्तरदिने शैली, भाषा, शब्द यो सबै कुरामा हामी काम गर्छै । हिजो उहाँ अडिसनमा आउँदा जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो पछि फाइनलमा उहाँलाई हेर्छौ त्यही ट्रान्सफरमेशनका लागि हामी काम गर्छौ । हामीले व्यक्तिको सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा मद्दत पुग्ने गरी काम गर्छौ । त्यसैगरी फेशन शोमा हामीले डिजाइनरको रचना या कुनै प्रोडक्टलाई मोडलमार्फत उत्कृष्ट ढंगले र्‍याम्प वा दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्छौं ।
नेपालमा फेशन र व्युटी प्याजेटनको अवस्था कस्तो छ ?
मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा झण्डै ५० करोड भन्दा माथिको वार्षिक ट्रान्जेक्सन छ । ५० करोडको ट्रान्जेक्सन भनेको कुनै पनि क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनका लागि पर्याप्त हो भन्ने लाग्छ । आगामी दिनमा अझ राम्रो हुने छ । पछिल्लो समय विभिन्न उमेर समूहका जस्तै बालबालिकादेखि लिएर युवा युवती र प्रौड अवस्थाका व्यक्तिमा पनि व्युटि प्याजेन्ट प्रति क्रेज बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा यो आमरुपमा गएको छ । देशव्यापीरुपमा हामीले ठूलो स्थान पाएका छौं । अहिले कोरोनाका कारण केही कालो बादल लागेको जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा आशाका सुनौलो किरणाहरु देख्दै छु ।
नेपालमा हुने ब्युटी प्याजेन्ट विवादरहीत भएको कम नै पाइन्छ नि ?
म फेशन कोरियोग्राफर र ब्युटी प्याजेन्ट ट्रेनर भएको हिसावले जुन तपाईंले प्रतियोगितामा आउने विवादको कुरा उप्काउनु भयो यसलाई म के भन्छु भने एउटा सिक्काको दुई वटा पाटा हुन्छ, मैले देखेको पाटो हेड हुन सक्छ अर्कोले टेल देखेको हुन सक्छ । मेरो जजमेन्ट हेडबाट भएको हुन सक्छ र अर्कोले टेलबाट गरेको हुन सक्छ । यसलाई प्राक्टिकल रुपमा बुझ्दा त्यहाँ जित एउटाको भएको हुन्छ र हार्नेहरू धेरै हुन्छन् । हरेकलाई केही न केही असन्तुष्टि हुन्छ । त्यो असन्तुष्टिमा जब हार्ने बेन्च सबै एक भइदिए पछि आरोप लगाउन सजिलो छ । यो मैले बास्तबिकता बताउन खोजेको हो । यसको मतलब सबै प्याजेन्ट अर्गेनाइजर ठिक छन् भन्न खोजेको चाहीँ होइन । यो विशुद्ध व्यक्तिको बौद्धिकता क्षमता जाँच्ने पाटो हो तर यसलाई केही व्यक्तिले व्यापार बनाउँदा तपाईंले भने जस्तै यस्ता समस्याहरू आएका छन् । अब हामीले प्रतियोगिता गराउने संस्था कस्तो हो त्यो बुझेर मात्रै भाग लिनुपर्छ । गलत कुराको आवाज उठाउनु पर्छ ।
तपाईं यो क्षेत्रमा रहेर आफूले के पाएँ जस्तो लाग्छ ?
मेरो कुरा गर्दा पनि म शुरुमा काठमाडौं आउँदा डाक्टर बन्ने भन्ने थियो । त्यसपछि समयक्रममा कुनै बेला गायक बन्ने मोह पनि चल्यो । यस्तै एक्टर बन्ने भुत पनि सवार भयो । समय सँगसँगै मोडलिङबाट कोरियोग्राफीमा आएँ । यसमा आएपछि मलाई लाग्यो मेरो क्षेत्र यही हो । यसमा म केही उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो । यसमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो र पूर्णरुपमा यही क्षेत्रमा होमिएँ । मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा म सफल पनि भएको छु । मैले आजसम्म जे जति नाम र पहिचान, प्रतिष्ठा, सम्मानसँगै आर्थिकपक्षमा सवल पाटो यही क्षेत्रबाट आर्जन गरेको छु ।
यो क्षेत्रमा नयाँ आउँन चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताका लागि कडा परिश्रम र आफ्नो काम प्रतिको लगाव र इमानदारिता जरुरी छ । पढेर, बुझेर धैर्यताका साथ आउनुभयो भने यस क्षेत्रमा आउन चाहनेको भविष्य राम्रो छ ।
गीतकार डा. डीआरको गीत ‘जन्मौं जन्म न छुटिने नाता’
काठमाडौं : विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जन्मौं जन्म न छुटिने नाता...’ सार्वजनिक भएको छ । सागर अधिकारीको संगीत, राधिका भण्डारीको स्वर, संजय श्रीपालीको एरेञ्ज र गोविन्द सोनीको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
माइकल चन्दको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा डा. डीआर आफैँ र नायिका अनु शाहलाई फिचरिङ गरिएको छ । गीतको भिडियोमा आफूले एकदमै मन पराएको मान्छे आफूदेखि टाडा भएको विषयलाई निक्कै कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । उत्सव दाहालको छायाँकन रहेको भिडियोमा शिलन लम्सालको सम्पादन छ ।
‘गीत जति मन छुने खालको छ भिडियो पनि त्यतिकै राम्रो बनाउने कोशिस गरेको छु’, निर्देशक चन्दले भने । भिडियो डीआर म्युजिक एण्ड क्रियशनको युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाली गीत संगीतमा डा. उपाध्यायले सार्वधिक विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसहित उनले गीत संगीतका विविध ५१ विधामा विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।
डा. उपाध्यायका गीत सबै वर्ग, पेशा र समुदायका लागि रहेका छन् । उनका २४ एल्बममा मायाप्रेम, रोमान्स विछोड मात्र नभएर समाजका लागि लेखिएका गीत पनि रहेका छन् । उनका चाड पर्वका गीतदेखि लिएर छोरी विदाई गर्दाका गीत, पर्यटन गीत, स्वास्थ्य तथा योग सम्बन्धी गीत, महिला प्रताडना सम्बन्धी गीत, मजदुर, किसान र भरिया सम्बन्धी गीतलगायत बिभिन्न परिवेशका गीत छन् । उनका ११ उपन्यास र तीन गीतिपुस्तक पनि प्रकाशित छन् ।
बलिउडका चर्चित अभिनेता दिलीप कुमारको निधन
एजेन्सी : बलिउडका चर्चित अभिनेता दिलीप कुमारको निधन भएको छ । भारतीय समयानुसार बुधबार बिहान साढे सात बजे मुम्‍बईको खार हिंदुजा अस्पतालमा ९८ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको भारतीय सञ्‍चार माध्‍यमले जनाएका छन् । समाचारमा जनाइएअनुसार उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए ।
उनले 'ज्वार भाटा' (१९४४), 'अंदाज' (१९४९), 'आन' (१९५२), 'देवदास' (१९५५), 'आजाद' (१९५५), 'मुगल-ए-आजम' (१९६०), 'गंगा जमुना' (१९६१), 'क्रान्ति' (१९९१), 'कर्मा' (१९८६) और 'सौदागर' (१९९१) समेतगरी ५० भन्‍दा बढी बलिउड फिल्‍ममा अभिनय गरेका छन् ।
उनले ८ पटक 'बेस्ट एक्टर' का रूपमा फिल्मफेयर अवार्ड पाएका थिए । यस्‍तै हिन्‍दी सिनेमामा सबैभन्‍दा ठूलो सम्‍मान मानिने 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड'बाट पनि उनलाई सम्‍मानित गरिएको थियो । सन २०१५ मा भारत सरकारले उनलाई पद्‍म भूषण पनि दिएको थियो ।
‘जनताको बारेमा सोच्ने नेताको आवश्यक छ’
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल गायिका हुन् सहिमा श्रेष्ठ । सानैदेखि गायनमा रुची राख्ने चर्चित गायिका सहिमा श्रेष्ठ एकपछि अर्को स्रोता रुचीको गीत सार्वजनिक गर्ने गायिकामा पर्छिन् । लगातार उनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुमा उनकोे सुमधुर आवाज, मेहनत र परिश्रमले गर्दा नै यो सफलता हासिल गरेकी हुन् । अर्घखाँचीको सन्धिखर्ककी स्थानीय वासिन्दा गायिका सहिमा श्रेष्ठ काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको पनि दशक बितिसकेको छ । दुई सय पचास भन्दा बढी गीत गाइसकेकी सहिमा स्टेज कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक माग हुने गायिकामध्येमा पर्छिन् । सधै ब्यस्त रहने गायिका सहिमालाई स्टेज क्वीन भनेर पनि चिनिन्छ । देशभित्र मात्र नभएर बिदेशमा हुने कार्यक्रममा समेत उनको माग हुने गर्छ । उनलाई प्रतिभाशाली, भर्सटाइल गायिका भन्न सकिन्छ र उनीमा हर प्रकारको गीत गाउन सक्ने क्षमता पनि छ । उनले आधुनिक गीत, गजल, भजन, लोकगीत, तथा फिल्मी गीतमा पनि स्वर भरेकी छन् भने भोजपुरी, थारु र मैथिली गीतसमेत गाएकी छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा पनि नयाँ नयाँ गीतसंगीतको काममा जुटिरहेकी गायिका सहिमा श्रेष्ठले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
कसरी बित्दैछ दिनहरु ?
निषेधाज्ञाको समय भएकाले घरमै बस्ने संगीत साधना गर्ने त्यसैगरी बितिरहेको छ । अलि खुकुलो भएपछि काम गर्न सहज हुने आशामा छु ।
पछिल्लो समय गायनमा नयाँनयाँ भाका हाल्न थालेका छन् यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
पछिल्लो समय गायनमा नयाँ नयाँ भाका हाल्नु राम्रो हो, सधैं एउटै पनि राम्रो हुँदैन । स्रोताहरुलाई नयाँ नयाँ टेष्ट चाहिरहेको हुन्छ त्यसैले संगीतको उपलब्धी नै मान्नु पर्छ ।
नेपाली संगीतको वास्तविक धरातल भनेको कुन वर्ग हो जस्तो लाग्छ ?
बाहिरी हावाले नछोएको गाउँले वा किसान वर्ग हुनुपर्छ ।
युवा पुस्ता विदेशी भाषामा आश्रित भइरहेको हाम्रो सांगीतिक अवस्थालाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?
समय परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै नयाँ पुस्ताका युवा वर्गले आफ्नो रुचीको संगीत ग्रहण गर्नुलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ र हामीले पनि उनिहरुको चाहना बुझेर गीतसंगीत सिर्जनामा ध्यान दिनु पर्छ ।
उबेला गायक कलाकारले रेडियो नेपालमा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँदा ठुलै युद्ध जितेको महसुस गर्थे रे अहिलेको एफएम रेडियो, युट्युब र मोबाइल जस्ता प्रविधिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
स्रोता दर्शक माझ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न अहिलेको प्रविधिले अति नै सहज बनाइ दिएको छ । तर प्रविधिको विकाससँगै विकृती पनि उत्तिकै बढेको छ । पहिला धेरै मेहेनत साधना गर्नु पथ्र्यो भने आजकल प्रविधिको विकाससँगै साधना पनि घटेर गएको छ ।
नेपाली संगीतको लोकप्रियताको उचाइमा पुग्नु भएको छ, स्वयं आफुलाई चाहिँ के लाग्छ ?
यो सबै स्रोताहरुको मायाको देन हो । नेपाली संगीतको उचाइमा पुग्नु भन्दा पनि सधैं केही नयाँ र राम्रो गर्ने कोसिसमै छु । दर्शक स्रोताहरुले मन पराइदिनु भएको छ साथ दिनु भएको छ खुशी लाग्छ ।
गाउनु मात्र हुन्छ कि संगीत सिर्जना पनि गर्नु हुन्छ ?
गाउनेमात्र गरेको छु । अहिलेसम्म संगीत सिर्जना गरेको छैन ।
देश विदेशमा हुने साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त भैरहने गायिका कोभिडका कारण त्यतिकै बस्नु पर्दाका ब्यफाइदाहरु ?
कोभिडका कारण मलाईमात्र नभएर सबैलाई उतिकै असर परेको छ । देश विदेशमा हुने प्रोग्राममा त समय अनुकूल भएपछि जाने कुरा भयो अहिलेलाई ज्यान सुरक्षित राख्नु नै फाइदा र उपलब्धी हो जस्तो लाग्छ ।
लकडाउनको बिचमा कुनै सिर्जना ल्याउनु भो कि ?
लकडाउनको बीचमा मैले आफ्नो चार वटा गीतको भिडियो बनाएर दर्शकमाझ पस्किएँ । ओक्कल दोक्कल, सिल्कि कपाल, मायाले मायाले, मोटर सरसर छन् । जुन गीतले अहिले राम्रै चर्चा बटुली रहेको छ । र अरु नयाँ काम पनि भैरहेको छ ।
तपाईं त सबैले मन पराउने, स्टेज तताउने गायिका स्टेज प्रोग्राम नहुँदा कस्तो लागिराछ ?
सधैं जसो स्टेज प्रोग्राम गरिरहने अहिले यसै बस्नु पर्दा अलि नरमाइलो त लागिहाल्छ । दर्शक स्रोतामाझ प्रत्यक्ष भेट हुन पाएको छैन त्यसकारण पनि अलि खल्लोपन महसुस हुन्छ । चाँडै नै त्यो दिनहरु फर्केर आउँछ आशा गरौं ।
गीतसंगीतमा पनि ठुलो लगानी भैरहेको छ, राज्यबाट के आशा गर्नु हुन्छ ?
हो, संगीतमा धेरै ठुलो लगानी भैरहेको छ, राज्यबाट के आशा गर्नु देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा आशा गरेपनि केही हुनेवाला छैन । यस्तो माहामारीको बेला अनि प्राकृतिक प्रकोपले देशका जनता घरबार विहीन भैसक्या छ, स्वास्थ्य सामग्री पाएका छैनन्, जनताको यस्तो बिचल्ली भैरहेको अवस्थामा के माग के आशा हुन्छ र ? पहिला देशको हालत ठिक होस्, देश विकास र जनताको बारेमा सोच्ने नेताको उदय होस्, राम्रो व्यवस्था आवस् अनि आशा राखौंला ।
यो क्षेत्रमा लागेर पछुतो छ कि छैन र आर्थिकरुपले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो क्षेत्रमा लागेर खुशी छु केही पछुतो छैन । जीन्दगीमा केही कुरा गुमेको हुनसक्छ भने धेरै कुरा प्राप्त पनि भएको हुन्छ त्यसैले म सन्तुष्ट छु ।
यो साल तीज गीत ल्याउनु हुन्छ कि हुन्न ?
तीज गीत ल्याउने सोचमा छु । हेरौं के हुन्छ ।
फुर्सदमा कसको गीत गुनगुनाउनु हुन्छ ?
फुर्सदमा म पुरानो पुरानो सदाबहार गीत गुनगुनाउने गर्छु । नारायण गोपाल, अरुणीमा लामा, तारा देवी, लता मंगेस्कर, आशा भोसले जीको गीतहरु प्रायः गुनगुनाउने गर्छु ।
‘भिजुअल इफेक्ट कार्यबाट सन्तुष्ट नै छु’
युवाहरु नै परिवर्तनका सम्वाहक हुन् भन्ने एउटा उदाहरण बनेका छन् भिजुअल आर्टिष्ट अच्युत बजगाईं । सन् १९९५ मा काभ्रेको नयाँ गाउँ देउपुरमा बुवा शिवप्रसाद बजगाईं र माता तुलसा बजगाईंको कोखबाट जन्मिएका बजगाईंले गुरुबाट मात्र होइन आफ्नो परिवारबाट पनि ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । चलचित्र इतिहासमा भिजुअल इफेक्टको कलामार्पmत आफने नाम चिनाउन उनी ंसर्घषरत छन् । भिजुअल इफेक्टमार्फत चलचित्रको गुणस्तरमा योगदान दिँदै चलचित्र, चलचित्र प्राविधिक, कलाकारको न्याय, समानता र परिवर्तनका लागि विभिन्न संघ–संस्थामा रही काम गर्दै आएका छन् । उनका धेरै चलचित्रहरु नेपाली दर्शकमाझ चर्चामा छन् । बजगाईं चलचित्रमा भिजुअल इफेक्टको विकास, संरक्षण एवं सर्जकको मर्यादा र अनुशासनलाई सदैव उच्च स्थानमा राखेर परिवर्तन र समृद्धिका लागि निष्ठापूर्ण लागेका शालिन युवा हन् बजगाईं । उनी गा्रफिक डिजाइनिङ एसोसियसन नेपालको अध्यक्ष लगायत विभिन्न संघ संस्थाको जिम्मेवारीमा पनि छन् । उनले राष्ट्रियस्तरमा थुप्रै सम्मान, पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । उनै युवासँग मध्यान्ह दैनिकले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
भिजुअल इफेक्टको कार्य कहिलेदेखि शुरु गर्नुभयो ?
मैले वि.सं. २०११ देखि शुरु गरेको हँु । स्कुले जीवनदेखि नै चलचित्र एकदमै राम्रो लाग्थ्यो । त्यो निरन्तर रह्यो ।
तपाईंले भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट बन्छु भन्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो ?
चलचित्र भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मलाई फिल्म हेर्न पाएँ भने अरू केही चाहिन्नथ्यो । मलाई पर्दामा हिरो बन्ने रहर थिएन, प्राविधिक भएर काम गर्ने त सोचेको पनि थिइनँ । म फिल्म हेर्दा रमाउँथे । मलाई चलचित्रमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो । म जन्मिएको ठाउँ काठमाडौंदेखि धेरै नजिकको जिल्ला भएर होला मलाई नजिकबाट नियाल्ने मैका पनि पाएँ । म अन्य देशको सिनेमा पनि हेर्ने गर्थें जहाँ भिजुअल इफेक्टका अधिक प्रयोग भएको पाएँ । जतिबेला नेपाली चलचित्रमा भिजुअल इफेक्टको त्यति प्रयोग पाउँदैनथ्यो । मेरो आगमनपछि अलि राम्रो भएको छ ।
कति वटा चलचित्रमा काम गर्नुभयो ?
आफनै इच्छा अनुरुप चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेकेँ । द लास्ट किसबाट भिजुअल इफेक्टको यात्रा थालनी गरेँ । हालसम्म २ दर्जन भन्दा बढी चलचित्र, डकुमेन्ट्री, एड, म्युजिक भिडियो, टिभिसि लगायतमा काम गरिसकेको छु । रोमियो, मेला, कायरा, पूनर्जन्म, वीरङ्गना, होलिडे, उल्झन, भिलेन, पटुकी, आरोप, छिरिङ्ग, प्रेमलिला, ए मेरो हजुर ३, एक्लव्य, लभ डायरी, माया के होला, साम्राज्य, तलास, सिमाना, काडेतार आदीमा भिजुअल इफेक्ट भएर काम गरिसकेको छु । अहिले आइएनजिओको डकुमेन्ट्री र कोइराला फउन्डेसनको बिपिको विद्धोह नामक डकुमेन्ट्रीमा व्यस्त छु ।
अर्वाड पनि पाउनु भएको छ ?
पाएको छु धेरैपटक । आफने कलालाई न्याय गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यही दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाहा गर्दा प्राप्त हुने सम्मान र अवार्डलाई म र मेरो काम प्रतिको माया र सद्भावको रुपमा स्वीकार्छु । मेरो एउटै मान्यता छ हामी जुन काम गर्ने प्रण गर्दछौं । त्यसैले सफलता दिलाएरै छोड्छ । त्यसको प्रभाव चाहे आज होस् या भोलि जिवन्त रहिरहन्छ ।
भिजुअल इफेक्ट भित्रको सन्तुष्टी के हो ?
मैले आत्मसन्तुष्टि हो भनेर बुझ्छु । तर यस विषयमा म भाग्यमानी नै छु । सादय अर्थ र प्रतिष्ठा दुबैबाट म सुन्तुष्ट छु ।
कसरी यस्तो सफलता मिल्यो ?
म भाग्यले भन्दा महेनतले अघि बढेको छु । म निरन्तर मेहनत गरिरहने पात्र भएकोले मलाई सबैले मन पराउनु हुन्छ, माया गर्नुहुन्छ । सफलता त्यो अवस्था हो जसले आफूलाई मात्रै होइन । अरुलाई समेत डो¥याएर हिड्न सक्छ । मेरो बारेमा भनिएको कुराले ममा थप उर्जा र जिम्मेवारी बोध गराउँछ ।
पैसा धेरै लिनु हुन्छ रे त ?
मेहेनत अनुरुपको हुनैपर्छ । म चलचित्रको प्रविधि पाटालाई गहन रुपमा बुझ्छु, स्वीकार्छु त्यही अनुरुप आफूलाई उतार्ने प्रयास गर्छु । मैले कमजोर काम गरे भने त्यो त बारम्बार देखिन्छ । त्यहाँबाट दर्शकहरु मप्रति गलत धारण बनाउँछन् । दर्शकहरुको विश्वास जित्न माया पाउन मैले अत्यन्त मेहेनतका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि मैले आवश्यक डिमाण्ड गर्ने गरेको छु । फेरि निर्माता दिन कन्जुस्याई गर्नुहुँदैन । किनकी म त्यो भन्दा बढ्ता मेहनत गर्दछु । कतिपयले त थपेर समेत दिनुभएको छ ।
नयाँलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ कि ?
आज प्रविधिको विकासले पनि हुन सक्छ, काममा भन्दा प्राप्तिमा हतारो भएको देखिन्छ । तर सिकेर आउनुस् राम्रोसँग मन लगाएर काम गर्नुस्, एकदिन कुनै निश्चित ठाउँमा पुगेपछि अवश्य सफल भइन्छ । कोभिड–१९ का कारण संसारले नै ठुलोे समस्या भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली चलचित्रका प्रविधिक, कलाकार तथा चलचित्रकर्मीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउँदै उनीहरुमा सर सहयोगमा छु ।
‘तिमी मेरो साथी’ अर्थात राजु र वसन्त
काठमाडौं : चालिसको दशकको उत्तार्धमा नेपाली सांगीतिक आकाशमा एउटा सांगीतिक जोडीको चर्चा शिखरमा थियो । संगीतकार राजु सिंह र गीतकार वसन्त वित्यासी थापाको नामले प्रख्यात जोडी त्यो समयको एक लोभ लाग्दो जोडीमा पर्दथ्थो । एकसे एक सफल गीतहरु राजु वसन्तको नाममा बजारमा आउँथे । हरेक एफएम रेडियो पत्रपत्रिका जताततै गीतकार वसन्त र संगीतकार राजु सिंहको चर्चाले भरिन्थे ।
रेडियो र एफएमहरुमा राजु र वसन्तका गीतहरुले बेग्लै छाप छाडेका थिए । दर्शक श्रोताहरु यो जोडीको गीतको प्रतिक्षामा हुन्थे । रित्तो सडकमा, नजरको दोषि बनी, हिँड्दा कहिले ठेस लाग्छ, हिजो आज गाउँ भरि हल्ला छ, आश्वासन नदेउ, बिन्ती आलो मेरो घाउमा,कसको आँखा लाग्यो बरै, बिरानो भो परदेशी लगायतका दर्जनौं सदवाहार गीतहरु राजु वसन्तको नाममा हामी अहिले पनि सुन्न सक्छौं ।सांगीतिक क्षेत्रमा गीतकार र संगीतकारको जोडीको रुपमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको राजु र वसन्तको यो जोडी मह जोडी जस्तै लोकप्रिय थियो त्यो बेला ।
संगीतकार राजु सिंह प्रतिबिम्ब व्यान्ड मार्फत नेपाली सांगीतिक आकाशमा बेग्लै रफ्तारमा दौडिरहेका थिए । २०४६ सालदेखि २०४८ सालसम्म यो व्यान्डले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा एक किसिमको तहल्का नै मच्चाएको थियो । प्रतिबिम्ब व्यान्ड त्यो बेलाको नेपथ्य, कन्दरा, मध्याह्न लगायतका व्यान्ड जस्तै चर्चित थियो । जोन, धनुषा,सुदीप रिजाल, पारु लामा, सिमा पोखरेल,पद्यमा शाह,सृजना श्रेष्ठ,रिमा गुरुङ, पुनम प्रधान जस्ता युवा गायक गायिकाहरु प्रतिबिम्बमा जोडिएका थिए । लोचन भट्टराई, रामकृण्ण ढकाल,सुकमीत गुरुङ, दिप तुलाधार, गोपालमान सिंह लगायतका नाम चलेका हस्तीहरुको संलग्नताले प्रतिबिम्बको उचाई झन् चुलिँदो थियो ।
कहाँ तिम्रो मायालु,सुन केसरी त्यो खोली,नजरको दोषि बनी, आकाशको बादल सरी,बास देउ मलाई, सम्झना छ छाती भरी जस्ता हिट गीतहरु प्रतिबिम्बको नाममा रेडियो र एफएमहरुमा खुब गुन्जिन्थे । वसन्तलाई प्रतिबिम्बका ती कर्णप्रियहरु गीतहरुले छोएको थियो । उनी प्रतिबिम्बको ठूलो शुभचिन्तक भइसकेका थिए । त्यति बेलासम्म वसन्तप्रतिबिम्बसँगै राजुको संगीतको पनि प्रशंसक बनिसकेका थिए ।
त्यसो त वसन्त बेला बखत गीत कविता नलेख्ने होइनन् । उनलाई गीत संगीतमा सानैदेखि रुचि थियो । आफ्ना गीतहरु रेडियो एफएमहरुमा बजेको अरुले वाह वाह भन्दै तारिफ गरेको सुन्न आतुर थिए । २०४८ सालको आसपासमा उनै संगीतकार राजु सिंहसँगको एक भेटले उनको गीतकार बन्ने सपना साकार बनाइदियो ।
संगीतकार राजु सिंह प्रतिबिम्बको दोस्रो भागको प्रचार प्रसारको क्रममा ठमेल आसपासमा व्यस्त थिए । राजु र वसन्तको पहिलो भेट त्यहीँ हुन पुग्यो । विस्तारै त्यो भेटघाट बाक्लिँदै जान थाल्यो र वसन्त राजु सिंह र प्रतिबिम्बसँग जोडिन पुगे । प्रतिबिम्बको एक नयाँ सदस्यका रुपमा वसन्तले प्रतिबिम्ब भाग तीन अबिरल एल्बममा एकल गीतकारको रुपमा प्रवेश पाए । राजु र वसन्तको सांगीतिक सहयात्रा त्यहीँबाट शुरु भयो ।
अविरल वर्षा जुनतारा लुकामारी खेल्दै छ प्रीयसीको सम्झनामा राजु र वसन्तको पहिलो रेकर्ड भएको गीत हो । यही गीतबाट शुरु भएको सहयात्रा आजसम्म उही गतिमा दौडिरहेको छ । अविरल एल्बमपछि यो जोडीले दर्जनौ एल्बमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । ठूल्नानी,गहना,मित्रता,दशक राजु र वसन्तका चर्चित एल्बम मध्येमा पर्दछन् । यी एल्बमहरु प्रतिबिम्ब व्यान्ड बन्द भएपछि आएका एल्बमहरु हुन् ।
विभिन्न कारणवश सहमतिमा प्रतिबिम्ब व्यान्ड बन्द भएपछि यसका सदस्यहरु लाखापाखा लागे तर राजु र वसन्त सांगीतिक कर्ममा जोडी बनेर निरन्तर लागि रहे । नेपाली सांगीतिक आकाशमा एक पछि अर्को सफल गीतहरु दिँदै गए । रित्तो सडकमा, नजरको दोषी बनी, कस्को आँखा लाग्यो बरै, हिँड्दा कहिले ठेस लाग्छ,ठूल्नानी, लगायतका गीतहरु यो जोडीको चर्चित गीतहरुमा पर्दछन् ।
राम कृण्ण ढकाल, यम बराल, आनन्द कार्की,नविन के भट्टराई, सुनिता सुब्बा, रिमा गुरुड होडा,राजेशपायल राई, स्वरुपराज आचार्य, मोहन भुसाष,सपना श्री जोन, धनुषालगायतका गायक गायिकाहरुको आवाजले राजु र वसन्तको सिर्जनालाई अझ सुमुधुर बनाएको छ ।
नेपाली सांगीतिक आकाशमा यो जोडीको सहयात्रा तिसौंवर्षमा पुगेको छ । उही आत्मियता उही मित्रता र जोश आज पनि कायम छ राजु र वसन्तको । लामो यो सहयात्रामा एकले अर्कालाई दिएको सम्मान र विश्वास नै हाम्रो सम्बन्धको बलियो आधार हो भन्छन् संगीतकार राजु सिंह र गीतकार वसन्त वित्यासी थापा ।
सांगीतिक सहयात्राको सिल्भरजुब्ली पार गरिसकेको यो जोडीले यसैको उपलक्ष्यमा ‘तिमी मेरो साथी’ नामक एल्बम बजारमा ल्याउँदै छ । ‘तिमी मेरो साथी’का केही गीतहरु रेकर्ड भइसकेका छन् भने केही तयारीमा छन् ।
राजेशपायल राई, स्वरुपराज आचार्य, धर्वेन्द्र सेवान,रामकृण्ण ढकाल,रिमा गुरुङ लगायतका गायक गायिकाहरुले उक्त एल्बममा आवाज दिँदैछन् । ‘तिमी मेरो साथी’ यो जोडीको एक अर्काप्रति सम्मान र समर्पित एल्बम हो भने यो लामो सहयात्रामा माया र हौसला प्रदान गर्ने आमदर्शक श्रोताहरुप्रति समर्पित एल्बम पनि हो ।
‘साचो अर्थमा संगीतबिनाको गीत नै गीत हो’
जन्मिँदा एक्लै, म मरेको छैन, म राम्रो र नराम्रो सावन होइनन्, मेरा नयन लगायतका छ सय भन्दा बढी कालजयी गीतका सर्जक गीतकार अरुण तिवारी जीवन दर्शनका गीतहरु लेख्न रुचाउँछन् । उनका अधिकांश गीतहरुमा हामीले जीवन जगत र दर्शन भेटछौं । त्यसो त गीतकार तिवारीले मायाप्रेमका गीत नलेखेका होइन तर उनको परिचय तिनै जीवन र दर्शनका गीतहरुले बढी मात्रमा दिएको उनी स्वयं स्वीकार गर्दछन् । त्यति मात्र होइन गीत लेखेर राम्रै पारिश्रमीक लिने एक मात्र गीतकार हुन् अरुण । पछिल्लो पुस्ताका एक सफल र चर्चित उनै गीतकार अरुण तिवारीसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि लक्ष्मण पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिलेको गीत संगीतलाई कसरी मुल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
अहिलेको गीत संगीतलाई मैले काटिएको चंगा जस्तो भन्छु । जता जता हावा बहन्छ त्यतै त्यतै बगेको छ । न मानसिक रुपमा सन्तुष्ट, न त आर्थिक रुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छ । गीत संगीतमा लागेका कमै सर्जकहरु मात्र सन्तुष्ट छन् । सर्जकहरुले कुनै समय अडियो सिडि बेचेर तुरुन्तै आर्थिक लाभ उठाउँथे । तर अहिले युट्युब एक मात्र आर्थिक सहारा भएको छ, त्यो पनि कम मात्र । भिडियो बिना गीतको औचित्य नै छैन जस्तो लाग्छ । लाखौं खर्च गरेर भिडियो बनाउनु पर्छ । कुनै समय रेडियो र एफएममा गीत बजेको भरमा म्युजिक कम्पनिहरुले गीत खरिद गर्दथे भने जति पैसा दिन पनि तयार हुन्थे । तर बिडम्बना अहिले युट्युबमासमेत स्वयंले खर्च गर्नु पर्छ । भाइरल भनिएका गीतहरु साचो अर्थमा दश जनाले पनि सुनेको पाइँदैन । रातपछि दिन हुन्छ भने जस्तै यो अवस्था सधैं रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेको सांगीतिक अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनेहरु पनि छन्, के भन्नु हुन्छ ?
हरेक कुराको दुई वटा पाटा हुन्छन्, अँध्यारो र उज्यालो । एउटा धरातलबाट हेर्दा अहिलेको माहोल एउटा प्लेटफर्म हो । किन कि युट्युब अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो । जसलाई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हेर्न नियाल्न सकिन्छ । रेडियो टेलिभिजनको जरुरत भएन । तर जसरी तपाईंको फिजिकल सेल्स हुँदा खेरि सर्जकहरुको हातमा तुरुन्तै धेरै पैसा पथ्र्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । पहिला सिडि अडियो खरिद गर्ने व्यक्तिहरु सर्जकहरुको डाईहार्ट पmयान हुन्थे । मलाई अहिले पनि ति दिनहरुको राम्रो याद छ । अहिले पनि मेरा दर्शक श्रोताहरुले मेरो क्यासेटहरु किनेको कभरहरुमा हस्ताक्षर गरेको फोटो पठाउँछन् । त्यो बेलाको कुरा सम्झँदा मलाई अहिले पलास्टिक जस्तो लाग्छ । ल्याउने फालिदिने भावनात्मक सम्बन्ध रहेन । हाम्रा सृजनाहरु सुनाउनलाई पनि हामी आफैंले कराउन पर्ने अवस्था छ ।
त्यसोभए अहिलेको यो अवस्थाले नेपाली गीत संगीतलाई कहा पुर्‍ उँछ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको यो अवस्थाले संंख्यात्मक र गुणात्मकरुपमा बढी गीत र सर्जकहरुको आगमन भएकै छ । मानिलिऊँ संगीत क्षेत्रमा सयजना रहर र लहडमा लाग्ने र यसैलाई करियर बनाउने उद्देश्यले लाग्नेहरु पनि एकै चोटी आए । त्यस मध्ये दश जना राम्रो प्रतिभा जन्मने आशा गर्न सकिन्छ । तर सृजनाको हिसावले पहिलाको भन्दा अहिले धेरै हलुङगो सृजना आइरहेको छ । आज बजारमा आउँछ एक महिना पछि त्यो कहाँ हराउँछ स्वयं त्यसको सर्जकलाई नै थाहा हुँदैन । अहिलेको समय प्रतिभा कम र रातारात हिट हुन खोज्ने, पैसाको भरमा अगाडि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति बढी छ । यसले निश्चित रुपमा संगीत क्षेत्रलाई केही असर त गर्छ तर त्यो अवस्था लामो समय जाँदैन । अहिलेको यो अवस्थाले क्षमता हुनेहरुलाई केही असर गरेकै छ ।
यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ?
समय भनेको परिर्वतनशील हो, न हिजो जस्तो रहन्छ न आज जस्तो । जहिले पनि राम्रै चीज चलेकै हुन्छ । केही समय ग्रहण लागेको जस्तो भएको हो । आखिरमा सुन्दर शब्द संयोजन सुमुधुर स्वर सुन्तुलीत संगीतलाई दर्शक स्रोताहरुले मन पराउने छन् ।
नेपाली संगीतको क्षेत्रमा गीतकारहरुको व्यावसायको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
संगीतमा लागेर हिँड्नेहरु सबले आर्थिकरुपमा कमाउँछन् भन्ने हुँदैन । त्यसमध्ये केही प्रतिशतले मात्र हो कमाउने । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । गीतकारको रुपमा अरुको मलाई थाहा भएन तर मैले यसलाई व्यावसायी बनाएको धेरै भयो । म गीतको व्यापारी हुँ । मैले गीत लेखेर राम्रै कमाएको छु । नेपालको सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने गीतकारमा पर्दछु । महिनाको कम्तिमा पनि तीन चारवटा मेरा गीतहरु रेकर्ड भएकै छन् । भनेको जति आफनो अडानमा पारिश्रमिक लिने गरेको छु । सस्तोमा काम गर्ने हो भने महिनामा दश बाह्रसम्म गीत रेकर्ड गर्न सक्छु ।
तपाईंको विचारमा साचो गीत कस्तो गीतलाई भनिन्छ ?
कुनै गीत स्वरले मात्रै चल्न सक्छ भने कुनै गीत संगीतले । साचो अर्थमा गीत त्यो हो जहाँ स्वर र संगीत बिना नै वाचन गर्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ । गोपाल योन्जनका गीतहरु त्यो श्रेणीमा पर्दछन् ।
‘संघर्ष गरी बाँच्नु र यो समाजलाई केही दिन सक्नु नै जीवन हो’
गीत र कवितामा आफूलाई रमाउन चाहने व्यक्तित्व हुन् शैलेन्द्रकुमार चापागाईं । आफूलाई साहित्य अनुरागी भन्न रुचाउने उनी पेशाले स्वाथ्यकर्मी हुन् । साहित्यका विविध विधाहरू मनपर्ने बताउने उनी प्रायः सबै विधाहरू अध्ययन गर्न रुचाउँछन् भने लेखनका दृष्टिले बढी गीत, कविता लेख्न रुचाउँछन्  । विभिन्न साहित्य संघ संस्थामा रहेर यसको श्रृविद्धीमा तल्लिन रहेका उनी साहित्यक पत्रिका कल्पतरु र मझवुनको सहसम्पादक रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । त्यस्तै उनी गोठाटार साहित्यक मञ्चको उपाध्यक्ष, साहित्यक पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पारषद, रेडक्रसको आजिवन सदस्य, पशुपति भजन मण्डलीको आजिवन सदस्य हुन् । नेतृत्वमा देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सोचको विकास हुन नसकेका कारण देश अहिलेको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउने चापागाईंले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
तपाईंलाई थाहा छ, यतिबेला कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा छौं हामी । यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण सबैतिर ठप्प प्रायः छ । तर, पनि केही कामहरू भने भइरहेका छन् । म स्वास्थ्यसँग सम्मबन्धित भएको हुनाले पनि सुरक्षाका सावधानी अपनाउँदै आफ्नो कार्यमा लागि रहेको छु । केही फुर्सदिलो पनि छु । यही बीचमा गीत, कविता लेखन र विभिन्न पुस्तक अध्ययनमा पनि आफूलाई संलग्न गराएको छु । पछिल्लो समय कोरोना कहरसँगै बाढी पहिरोको चपेटामा हामी परेका छौं । यस्तो समयमा समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसमा पनि थोरै भए पनि अग्रसर भएको छु । यस्तै केही मेरा व्यक्तिगत काम, केही सामाजिक काम र केही व्यावसायिक काममा नै आफूलाई व्यस्त बनाउँदै आइरहेको छु भन्नुपर्ला ।
तपाईंको साहित्यतर्फ विशेष लगाव रहेको पाइन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर यहाँले व्यवसायिक सेवा पुर्‍याई रहनुभएको छ नि ?
हो, तपाईंले भने जस्तै म आफूलाई साहित्यतर्फ विशेष लगाव रहेको व्यक्ति हुँ । अर्थात म साहित्य अनुरागी हुँ । गीत, कविता, कथा लेखनमा लागेको भए पनि पूर्ण रुपमा त्यसतर्फ आफूलाई संलग्न गराएको छैन । केही लेख्छु र फाट फुट सार्वजनिक हुने गर्छन् । आफैँलाई चित्त बुझ्दैन । घिसिपटि रचना भन्दा केही उत्कृष्ट गरौ भन्ने लाग्छ जहिले नि । त्यसैले मैले कोरेका साहित्य रचना मेरै नोटबुकमा सीमित हुन पुगेका छन् । तपाईंले प्रश्नमा उल्लेख गरे जस्तै म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूलाई पूर्णरुपमा संलग्न गराएको छु । विगत लामो समयदेखि काठमाडौंको पुतलीसडकमा क्लिनिक सञ्चालमा छ । म ल्यावमा छु ।
त्यसोभए साहित्य तपाईंको शौखको क्षेत्र हो ?
शौख नै नभनौ । मैले माथिपनि भने साहित्य अनुरागी हुँ । मेरो विशेष लगाव छ । यससँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा पनि रहेर मैले कार्य गरिरहेको छु ।
साहित्यमा तपाईंको बढी रुचीको विषय के हो  ?
साहित्यका विविध विधाहरू मन पर्छन् । प्रायः सबै विधाहरू अध्ययन गर्न रुचाउँछु । तर, लेखनका दृष्टिले भने म बढी गीत, कविता लेख्न रुचाउँछु ।
सृजनामा वैचारिक महत्व कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ विचार बिनाको जति सुन्दर सिर्जना भए पनि त्यो आलकांरिक शव जस्तै हुन्छ । साहित्य सृजनामा वैचारिक महत्व मानिसको मुटु र मस्तिष्क जत्तिकै हुन्छ ।
जीवन के हो  ?
समान्यतय जन्मदेखि मुत्युबीचको समय नै जीवन हो । यो समयकाल भयो । तर यहाँ सुख र दुःखको मिश्रण हुन्छ, आरोह–अवरोह सामना गर्नुपर्ने हुन्छ  । विभिन्न सहज र कठिन परिस्थितिका बीचमा आफूलाई होम्दै अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ । संघर्ष गरी बाँच्नु र यो समाजलाई केही दिन सक्नु नै जीवन हो । जीवन एक सजीव यात्रा हो ।
कस्ता खालका किताब बढी पढ्नु हुन्छ ?
म सबै प्रकारका किताव पढ्छु । तर, कुनै कुनै कितावले मन छोएन भने बीचमै छोडिदिन्छु । म गैर आख्यान, आख्यान दुवै खालका पढ्छु । कविता, निवन्ध, नियात्रा, संस्मरण आत्मकथा, जीवनकथा पढ्छु । म साहित्य मात्र होइन, गैर साहित्य पनि पढ्छु । त्यसमा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र, संस्कृति र कूटनीतिजस्ता अध्ययनका विषय बन्छन् ।
वर्तमान देशको राजनीतिक अवस्थाले कतिको पिरोल्छ ?
पिरोल्ने मात्र होइन भतभती पोल्छ नि । हामीले के सोचेका थियौ अहिले के भयो भनेर ? के यही दिन देख्नका लागि नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदान दिएका थिए भन्ने लाग्छ । देशमा अमन चयन र विधिको शासनका लागि लडेर शहीद भएकाहरूले पनि हामीलाई केही गर्न सकेनन् भनेर धिक्कारदै छन् होला । फेरि यो बीचमा केही नभएका पनि होइन तर जुन रुपमा हुनु पर्ने थियो त्यसो हुन सकेन भन्ने मात्रै मेरो गुनासो हो । अर्थात हामीले जसलाई विश्वास गर्‍यौ उनीहरूले देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन सकेनन् भन्ने लाग्छ मलाई । हिजो हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुुग्छ भनेर भोट मागियो, जनतालाई भनियो, तर आज गाउँ गाउँमा भ्रष्टचार पुग्यो । आज संसदीय बहुमतको दुरुपयोग गर्दै धमाधम जन विरोधी विधेकहरू एकपछि अर्को ल्याउने काम भएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेतृत्वमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सोचको विकास हुन सकेन । यसका लागि युवा पुस्ताले अब हस्तक्षेपकारी भुमीका खेल्नुपर्छ । देश र जनता भन्दा व्यक्तिगत स्वास्र्थमा पूर्ण रुपमा चुर्लुम्म डुबेकालाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहगरी बर्हिगमन गराउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ । यसका लागि सबै तह र तप्काबाट दवाव सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
आफ्ना आसेपासे बाहेक अरुलाई जनता न देख्ने नेतृत्वका कारण माथिको मेरो आक्रोस हो भनेर बुझनुहोस् । मलाई के लग्छ भने कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा नेतृत्व ‘लिडरसिप’ महत्वपूर्ण पक्ष हो, लिडर बन्न सजिलो पनि छैन । आजको सदर्भमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने निष्ठा, योग्य र इमान्दारीता भएका शाहसी, निष्पक्ष तथा गुटभन्दा माथि उठेर पार्टी र संगठनमा लाग्ने व्यक्तिको खाँचो छ । देश र जनताप्रति वफादार नेतृत्वको आवश्यक छ । देशको माया भएको नेतृत्व नै आजको आवश्यक हो । भन्न त सबैले देश र जनताका लागि नेतृत्व गरेको भन्छन् मलाई त लाग्छ केही अपवाद बाहेक सबै ढोगी छन् । कम्मल ओढेर घ्यू खान्छन् । सबैलाई मिलाएर सही र न्यायोचित निर्णय क्षमता राख्न सक्ने व्यक्ति आजको आवश्यकता हो ।
म आफ्नै काममा लागि रहने, समाजमा खटिरहने व्यक्तिका रुपमा आफूलाई संलग्न गराउन चाहन्छु र त्यस्तै प्रकृतिको पनि छु । तपाईंको केही दिनदेखिको आग्रहलाई आज यस संवादका रुपमा पाठकमाझ आउँदै छ । यो समय र सवादका लागि तपाईं र तपाईंको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।